Category: Dawada raga
23.10.2020	By Yolmaran
Cudurka baaba siirka waa cudur aad uga dhex jira bulshadena. Cudurkani waa cudur si fudud ku faafa islama markaana dhibaatoyin badan ku keena dadka uu haleelo. Cudurkani wuxuu sababi karaa xanuuno badan wuxuna awood u leyahay inuu burburiyo difaaca jirka. Cudurkana waa cudur muddo gaaban wada saameyn kara jirka qofka uu haleelo oo dhan. Sababta ayaa ah in cudurkani dago marka hore ba xubnaha aasaaska u ah banii aadamka.
Sida xubnaha taranka dheef shiidka nervious system ka iyo waliba isago marka dambena saameeya neef mareenka. Sidoo kale wuxuu cudurkani saameeyaa kilyaha iyo kaadi mareenka. Calaamadaha lagu garto cudurkaan ayaa ah sida tan. Daal fara badan 2. Wareer 9. Xanuun kaa haleela dhinac ama bar bar dhan oo is wata. Sida lug sinta wad ilaa madaxa la gaaro.
Muruq aan bixin oo joogta ah. Marka xanuunkan waa xanuunka ugu sameynta badan xanuunada gurguurta ee qofka la socon kara muddo dheer. Daaweyn la hubo wax tarkeeda ayaa jirta oo cudurkani lagu daaweeyo inshaa allaah caafimaad deg deg ahna aad ka heli doonto. La soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website ka daawada hadii aad dareento xanuun kan si wax badan lagaga caawiyo.
Daawada kacsiga raga iyo dumarka kordhisa
Cudurka baabasiirka waa cudur jira soona jiri jirey waqtiyo aad u fog. Cudurka baabasiirka waa cudur gur guurta isla markaana aheyn cudurka qabatinkiisa ama waxyeela diisa deg deg tahay laakiin waa cudur halis ah isla markaana qatar gelin kara hab nololeedka qofka qaba cudurkani.
Calaamadaha lagu garto cudurkani waxaa ka mida 1: daal fara badan: daal la dareemayo marka qofka ku dhex jiro shaqadiisa ama socodka iyo guud ahaan daal fara badan. Muruq 2 da garbood kaaga taagan ilaa qoorta xabadka oo xanuun laga dareemo. Infection mar mar joogta ah sida dhanka kaadi mareenka. Dhalmada oo hakad ku yimaada ama la waayaba dumar iyo ragba.
Marka yuu ku dhici karaa cudurkaan saameyntiisu badan tahay? Qofkasta ayuu ku dhici karaa cudurkaan rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar ba. Saameynta cudurkaan waxey qaadataa mudo dheer oo gaareysa sanado in uu fahmo qofka cudurkani marka laga reebo astaamo dhowr ah oo qofka ku fahmi karo si dhaqsa ah in cudurkani la dersay.
Waxaana ka mida. Caloosha oo aan ku socon ama xaaladeedii wax iska bedelaan dhanka saxarada. Calaamadahaan iyo kuwo kaloo ka badan waxaa leh cudurka baabasiirka. Cudurkani mala kala qaadaa? Haa cudurkani waa la kala qaadaa waana cudur la iska dhaxlo oo hadii 2 daada waalid ama midkood qabey waa kugu dhalayaan. Cudurkaani ma sababi karaa cuduro kale? Haa cudurkaani wuxuu sababi karaa cuduro badan waxaana ka mida 1: cudurka dhiig karka 2:cudurada ku dhaca dheefshiidka.Post a Comment. Galmada oo wax uu Allah ubaneeyey dadka isguursaday ayaa ah Dareen naftu ubaahantahay Lagana maarmaan ah qofkuse uusan ka hakan karin Mudo badan.
Ogaw saliida beerka kaluunka ayaa ah muhiim oo si weyn sara ugu qaada awooda galmada ragga waxaana ku jira Capsules dabiici ah iyadoo taqaatiirta ku taliyeen in si weyn loo isticmaalo.
Dhanka haweenka ayaa lagu waramay in dareen xoogan oo galmo ay dareemaan marka ay cunaan yaanyada Tamaato taasi ii ah cayriin oo aaan la karin.
Posted by UnknownPublished at June 08, and have 0 comments. No comments:. Newer Post. Older Post. Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay Pink Iyo Brown-ka in ay yihiin goobaha ugu d Niikada Galmada iyo codka haweenka xiliga galmada socoto waxay kordhiyaan macaanka raaxada.
Gabadh Somalia oo magaceedu yahay Sumaya Ahmed ayaa film sexy looga duubay fagaara ajnabiyiin badan buuxaan. Sumaya maaha Somalidii ugu Naagaha waxay ugu jecelyihiin inay dhabar dhabar u seexdaan oo kaddib ninka ku kor seexdo, si daran ayay ugu raaxaysanayaan qaabkan, maxaay Bishaan kuwi ugu shidan.Sidaan casharkii hore ku soo qaadanay waxaanu isla soo fahanay waxa ay tahay gasteri ,ciladaha keena, habka loo baadho iyo qaabka loo daweeyo dawada dhakhtarka.
Haddaba waxaan rabaa maanta inaan isla eegno waxyaabo badan oo aad heli kartid, lagana yaabo inaad qaar ka mid ah aad isticmaashid balse aanad u qaadan si sax ah. Waanaga laga yaabaa inuu Allah sw kugu daweeyo ee bal sharkoodana Allah sw ka magan gal, khayr koodana waydiiso. Makeeda koobaad waa inaad xayimi ama yaran karaa ciladaha keenaya qasterida.
Markeeda labaadna waa inaad joojin kartaa waxyaabaha dhidhiya ama kordhiya. Kadibna qaado talooyinka intooda wanaagsan. Iskana ilaali xasaasiyada.
Waxaa dhici karta inaad xasiisiyad kuleedahay waxyaabaha qaarkood oo ay kaaga sii daraanba. Waxaa jira waxyaabo aad u faro badan oo aad aragtid marwalba, aad taqaanid ama aad isticmaashid, balse aanad ku baraarugsanayn dawada ku jirta iyo habka dawada loogala bixi karo. Intooda badana waa waxyaabo ka mid ah cuntooyinka.
Waxyaabahan aan hoos ku soo dhigi doono,kuligood waa waxyaabo wadda dabiici ah, qaarkoodna haddii uu Allah sw kuu qadaro kaa kaxayn kara gaasterida. Marka la barbar dhigo daawooyinka kalana aan wax dhibaato ah aanen kuu keenayn, waa haddii aanad xasaasiyad ku lahayn. Sorry afsoomali ma ku aqaanwaxaan u malaynayaa in Khamuun afsoomali lagu idhaah. Waxaa ku jira midhahan yaryar maado aad u fiican waliba aad uugu fiican dheefshiida. Waxaa ay miisaan u yeeshaa oo ay saxdaa dheecaanka caloosha it helps releasing gut juice from the intestine.
Waxa kale oo ku jira antioxidants aad u sareeyo. Haddii antioxidants jidhkaagu uu dheeli tiran yahay waxa ay u sahlaysaa difaaca jidhka inuu sifiican u shaqeeyo iyo waliba in uu jidhku si sahlan u qaato wixii dawo ah cudurkana la dagaalamo. Waxa kale oo ay u sahashaa qaadashada vitimens iyo minerals. Fiber aad u saraysina way ku jirtaa oo u fiican caloosha iyo saxaradaba. Soo qado malqaacada yare e shaaha mugeed, kadibna ku darso far iyo suul milix ah isna dhex gali.
Kadibna cun, isku tun ama isku ridiq ama kaligoodba calali. Mudo isticmaal. InshaAllah waxaan rajaynayaa inaad calaamadaha gasterida oo dhan aad iloowdid. Waxaad calashanaysaa jeex yar oo sanjabiil ah inta aanad cuntad cunin ka hor cuntiiyinka culus oo dhan ka hor.
Waxa kujira zanjabiilka maado la dagaalanta jeermiska iyo waliba dheeli tirta dheefshiida iyo dhaqdhaqaaqeeda, taas oo markaa keenaysa inay ka hor tagto gasterida. Waxa uu qunbuhu uu hodan ku yahay waxaa ka mid ah inuu caloosha dhaqdhaqaaqeeda uu saxo oo uu normal ka dhigo mudo dheer iyo mudo gaaban.
Isku day inaad isticmaashid biyahaas oo fresh aha oom waxba lagu darin. Waxaanad cabi kartaa markasta oo aad u baahatid khaasatan cuntada ka hor iyo kadib. Waxaad isku dartaa ml oo spinash juice ah iyo ml carrot juice ah, maalin walbana cab juice tan.
Waxaa labadan geedba kujira maadooyin ka qayb qaadanaya yaraynta gaaska. Waxay kaa caawinaysaa juice tani inay gaaska kala yarayso. Waxaad cabaysaa intaanad cunin cuntada maalin walba.Started by Xidig Board Qaybta Su'aalaha. Started by Cmqalinle Board Qaybta Su'aalaha. Started by Gacalsame Board Qaybta Su'aalaha.
Somali Medical Forums. Welcome, Guest. Please login or register. Home Help Login Register. Author Topic: Su'aal:Maxaa keena caadada dumarka oo aan xiligeeda ku iman? Read times. Waxyaabaha cudurka ah oo keeni karo caado wareerka waxaa ka mid ah: 1- Xaaladaha uu kacsanyahay ama uu dhacsan yahay qanjirka thyroodhka Ka akhriso halkaan 2- Xanuunada haweenka sida caabuqa minka, tubooyinka ama ugxansidayaasha.
Haddii uusan uur jirin waxaa muhiim ah in qofka la gala taliyo waxyaabaha sida dabiiciga u keeno caado wareerka oo aan kor ku soo xusnay. Haddii qofku daawo qaato caadada saamayn karto waa in lala socodsiiyo, cunno dheellitiran lagula dardaarmo, welwelka iyo walbahaarka la yareeyo, jimicsiga siyaadada ah laga fogaado IWM. Haddii caado wareerku aysan ka dhalan inta aan kor ku soo xusnay waa in lagu fakiraa cudurro dhawr ah oo keeno caado wareerka sida: 1- Infakshanka ku dhaco haweenka PID : Calaamadaha la socdo caado wareerka waxaa ka mid ah: xanuun dhabarka ah, xanuun wareegga caloosha qeybteeda hoose ah, qoyaan farjiga ka yimaada iyo tabardarri lugaha ah Ka akhriso halkaan 2- Xanuunno ku dhaca xubnaha ku hawl leh habdhiska caadada sida ugxan sidaha, tubooyinka iyo minkaba tusaale ahaan: kiish ugaxan buro, fiix, iyo cillad ilmogaleenka ah sida xanuunka loo yaqaanno " Endometriosis " 3- Waxaa kaloo jiri karo cudurro badan oo saameeya hormoonnada jirka maadaama ay yihiin kuwa kontoroola caadada sidaasne caado wareer u keeno, cudurradaasoo halkaan lagu soo koobi karin.
Talo: Haddii aadan xanuun isku ogeyn, da' dhalmo goys aadan iskaga shakisnayn, cunnadaada ay isku dheellitiran tahay, jimicsi siyaado ahne aadan samaynin kadibne aad isku aragtid caadada oo kaa soo daahda ama kugu soo dhakhsata, waxba ha walwalin waxaa laga yaabaa in isbadal hormoonadaada iyo shucuurkaaga ama welwel ama cillado kale oo saameyn kara caadifadaada in ay jiraan. Laakiin haddii aad isku aragtid, astaamo xanuun kale oo la socdo caado wareerka ama caadada oo wareersan muddo sadax bil ku dhow waa in aad baaritaan guud isku sameysaa adigoo la xiriira takhtar ku taqasusay cudurrada haweenka si laguu baaro, wixii jirane loo ogaado.
Ma jirtaa qaab dabiici ah ama cuntooyinka ka mid ah oo aan kaga hortagi karo ama ku ilaalin karo caadadayda in aysan wareerin? Waa in aad marka hore ogaataa waxyaabaha keeni karo si aad uga fogaatid, waana midda casharkaan uu kaa caawin doono, midda xigta waxaa jiro dhowr waxyaabood oo dabiici ah oo loo isticmaalo arrintaan waxaana ka mid ah: 1- Sanjabiilka oo shaah laga dhigto wuxuu yareeyaa xanuunka caadada, waxaana lagu daaweeyaa caado yarida ama soo daahiddeeda.
Qaado nuskeed oo sanjabiil shiidan la dhig koob biyo qandac ah muddo 5 illaa 7 daqiiqo, ku dar waxyar oo sokor ah, kadibne cab hal koob cunna kasta ka dib. Fiiro Gaar Ah: Isticmaalka talooyinkaan waa in la joogteeyaa dhowr bilood si loo arko faaidada laga helayo, Ha isticmaalin xilliga aad caadada ku jirtid.
Abdullahi M. Igala Soco:. Ashwaaq Jr. Similar topics 5. Su'aal: Diktoore, maxaa laga wadaa Reactive, Weak-reactive iyo Non-reactive?
Waa maxay "Autopsy"? Powered by SMF 2. July 02,AM by SomaliDoc. Caga-hurka ama Caga-ololka Maxaa Keeno?
Dhibaatooyin ka biya baxa ragga
August 23,PM by SomaliDoc. Su'aal: Maxaa lagu daaweeyaa Agoolka "Dandruff"? January 06,PM by SomaliDoc. December 05,PM by SomaliDoc. Maxaa meydka loo qalaa?
April 06,PM by Mo Digdig.Skip to content. Sida ay u badan yihiin haweenka aad bay uga xanuunsadaan falkan, waayo meesha aad bay u yartahay geedka ninkana waa weyn yahay, marka xanuun ayay kala kulmaan, laakin naagaha jecel in dabada laga waso maxaa u keeno arintaas?.
Xanuun iyo raaxo isku jiro ayay dareemaan marka loo galiyo geedka, labo isku jira lama arag oo nab isku dhahay labadaas aan ahayn, siilka haweenka buuranna aad buu uga kulul yahay kan kuwa caataha ah, weyna dhici kartaa inay noqoto gabarta caatada ah mid aad u kulul. Gabadha maku biyabixi kartaa istimaalka gadaal? Like this: Like LoadingTani saameyn weyn kuma laha uureynta iyo bacriminta ugxantaba.
Tani waa mid la kasbado oo mid qofku ku dhasho maahan, waxayna ka imaataa in marinka biyaha uu xirmo taas oo ka dhalato caabuqa prostate-ka iyo caabuqa ibta. Dhibaatooyinka aan kor ku soo xusay waxay la xiriiri karaan waxyaabahaan soo socda: — Sonkorowga — Xanuunnada neerfaha — Shilalka — Caabuqa saxaaxa iyo kaadi mareenka — Qalliin hore. Marka laga reebo qalliimada aan kor ku soo xusey iyo dhibaatooyinka kadib qaliinadaas imaan kara inta badan dhibaatooyinka la xiriira minada ama shahwada waxaa keeni kara cudurka baabasiirka oo ah mid isagu ku caan baxay arrimahaah iyo cudurka sokorowga daraasad badan oo aan sameynay waxaan ku ogaaney in xanuunka baabasiirka keeno xanuuno badan oo la xiriira hab dhiska xubnaha taranka ragga iyo dumarka.
Dhibaatooyinka la xiriira biya baxa ragga waxaa iyadana qeyb libaax leh ka qaata isticmaalka aalkolada iyo sigaarka qaadka iyo dhamaan mukhaadaraadka kala duwan. Sidoo kale waxaa keeni kartaa dhibaatooyinka la xiriira biya baxa galamada badan galmada badan waxey keeni kartaa ama xitaa sahli kartaa in qofka ku dhaco cudurka macaanka ama kaadi sokorowga loo yaqaan.
Hadii aad leedahay dhibaato la xiriirta biya baxa noocyadiisa kala duwan ama aad dareento dhibaato xagga hammiga ama dareenka ragganimeed si fudud ula soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan waxaan diyaar kuula nahey daawo la hubo wax tarkeeda hubinta sababta keentay dhibaatada. Daawada waxey kor dhineysaa tayada shahwada waxey bogsiineysaa dhamaan caabuq yada jiri kara iyadoo kordhineysa himada iyo dareenka raganimo waxey kordhineysaa dhaq dhaqaaqa sperms ka iyo dhamaan xaaladaha dhibaato ee soo wajaha ragganimada.
Daawada waxaa la qaataa muddo 40 maalmood ah inshaa allaah dhaqaatiirta waxaad ka heli doontaa caawimaad buuxda iyo wax qabad joogta ah sidoo kale waxaan daawo aad u sareysa u heynaa inshaa allaah dadka dhibaatooyin ka qaaday qaliimada aan kor ku soo xusnay iyo kuwa uu la dersay xanuunada ku dhaca dhamaan xubnaha taranka ragga iyo dumarka.
Had iyo jeer waxaa aad u haboon in marka aad wajiga taabaneyso dumar iyo rag ba marka hore waa in aad gacmaha si wanaagsan isaga meyrto oo aad qallajisaa waayo gacmaha waxaa la socda oo ay sitaan jeermiska ugu badan ee aan la qiyaasi Karin, marka waxaa caafimaad ahaan qof kasta u fiican in markasta gacmaha la hor dhaqo intaan wajiga la taaban. Jeermis germs waa noola yaal cayayaan ilma aragto ah inta badana la socda wasakhda kuwaas oo haddii ay jirkaaga qabsadaan taabtaan kugu sababi kara cudurro kala duwan iyo xitaa dhalan rog ku dhaca muuqaalka maqaar kaaga wajigu na kamid yahay.
Tusaale kale oo aad u muhiim ah cilmi baaris lagu sameeyay mobile phone ka gacanta ayaa waxa lagu ogaaday inuu ka jeermis badan yahay jeermiska suuliga laga qaado, waayo waxaa soo raaca kuna uruura jeermis aan xad lahayn ama aan la qiyaasi karin jeermigaa oo uu ka helo gacmaha banii aadamka waxaa nasiib darro weyn ah in aad ku aragto dadka qaarkiisa soomaalida na ay ku jirto iyagoo mobile phone ka ay isticmaalaan afka galiya arrin kaas oo sabab u noqon karto in qofka sidaa sameeya ay ku dhacaan cudurro badan.
Meeshan saliidu fadhiisato oo ah garka inta ugu badan ayaa sababta inuu nooca jirkan qofka lihi uu yeesho finan ka soo baxa garka oo kaliya Jirkan ayaa u baahan daaweyn rasmi ah oo hal mar qofka noloshiisa isticmaalayo si uu jirka noocan ah u helo waxa loo yaqaano Ph balance muhiimada laga leeyahay daaweynta rasmiga ayaa ah in la dhaqaajiyo saliida si anay dhib kale ugu keenin wajiga qofka jirkiisu noocan yahay.
Nooca Jirkan ayaa ah mid ay isku macaamil dhawyihiin jirka saliid leh oo loo wada isticmaali karo daaweynta rasmiga ee nooca jirka saliida leh. Cholesterol waa dufan jirku uu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo magaca cholesterol waxa uu leeyahay oo uu isugu jiraa 3 eray oo isa saaran waxa ayna kala yihiin sidan soo socota.
Waxaa lagu sameeyaa beerka waxaana laga helaa cuntada ka timaadda xoolaha, sida hilibka, ukunta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo subagga. Haddii cholesterol fara badan uu jirka ku jiro wuxuu noqon karaa mid waxyeelo gaarsiiya jirkaaga wuxuuna kordhin karaa halista aad ugu jirto in ay kugu dhacaan cudurrada wadnaha siiba waxaad Halis weyn ugu jirtaa in cholesterol ka dhiigaaga ku jira uu sarreeyo haddii: 1: Jirkaagu uu sameeyo cholesterol fara badan 2: haddii aad cunto cunno uu dufanka cayriin iyo cholesterol ka ay ku badan yihiin 3: haddii aad qabto cudurka sonkorowga 4: haddii heerka qanjirka dheecaan ka thyroid ka uu hooseeyo waxaana loo yaqaanaa hypothyroidism 5: haddii aad qabto qaar kamida cudurrada kilyaha.
Waxaa jiraan 3 nooc oo dufan ah oo dhiiggaaga ku jira: 1:Dufanka Cufkiisu Sarreeyo High Density Lipoproteins waxaana loo soo gaabiyaa HDL waxaana loo yaqaanaa cholesterol ka wanaagsan good cholesterol faaiidada uu u leeyahay jirkaaga waxa ay tahay wuxuu cholesterol ka dheeraadka ah ee qofka cudurada ku sababa ka qaadaa dhiiggaaga wuxuuna ku celiyaa beerka si markaa jirkaagu uu u awoodo inuu uga takhaluso dufanka dheeraadka ah.
Heerarka Dufannada dhiigga waxaa lagu ogaadaa baaritaan dhiigag qofka laga qaado. Natiijooyinka baaritaan ka waxa ay kuu sheegayaan heerka guud ee cholesterol ka dhiiggaaga sida. Xaddiga saaidka ka ah ee cholesterol ka sarreeya dhiiga qofka ku jira waa sidatan.
Xaddiga qofka caafimaadka qaba ee cholesterol ka wanaagsan HDL waxaa laga rabaa sidatan. Dadka uu jirkooda ku badan yahay cholesterol ka xumi isla markaana qatar weyn ugu jira cudurada wadnaha xaddiga cholesterol ka xun waa sidatan.
Wuxuu xad ka bax noqdaa oo aad u sara maraa marka uu gaaro heerkan. Cabirka Triglyceres ee qofka caafimaadka qaba waa sidatan. Cholesterol levels Lipid panel ama lipid profile Waxaana loo baaraa qeybahan soo socda. Triglycerides waa nooc kamida dufanka waxaasi kordhiya siyaadiya wax yaabaha mac macaanka ah iyo cabista alcohol lada ama khamriga.
Sida ugu wanaagsan marka la baarayo cholesterol ka ayaa waxa ay tahay in qofka uusan wax ba cunin 9 saacadood ilaa 12 saacadood wax aanan aheyn biyaha caadiga ma ahee. Haddii qofka lagu sheego in uu leeyahay jirkiisa xaddi aad u badan oo cholesterol ah ama uu jiro sare u kac nooc kamida noocyada dufanka jirka waa cholesterol ka ee waxaa waajib ah in qofka uu si deg deg ah isaga daaweeyo arrintan waxa ay gacan buuxda qofka ka siineysaa in uu waqti hore sameeyo ka hortag ah in ay yimaadaan cuduro badan oo badan kooda asiiba wadnaha kilyaha maqalka iyo aragga.
Xubnaha muhiim ka ah ee wax yeelada uu gaarsiiyo cholesterol ka jirka ku bata waxaa kamida. Daaweyn rasmi ah oo jirkaaga ka saareysa guud ahaan cholesterol ka siyaadada ku ah jirkaaga isla markaana jirkaaga siineysa tababar uu si dabiici ah ugu kontaroolo xaddiga cholesterol ka ee jirkaaga uu sameynayo daawooyin kan ayaa jirkaaga u suura galinaya in uu hoos u dhaco kororka siyaadada ee guud ahaan ba cholesterol ka jirkaaga uu sameynayo ama uu ka soo nuugayo cuntooyin ka aad isticmaasho sidoo kale daawooyin ka waxa ay kor u qaadayaan cholesterol wanaagsan sidoo kale waxa ay hoos u dhigayaan cholesterol ka xun ee cudurada sababa daaweynta rasmiga ah sidoo kale waxa ay faaiido weyn u leedahay dadka qaba cudurka dhiig karka noocyadiisa kala duwan marka laga reebo nooca loo yaqaano secondary hypertension oo isagu ay sababaan xaaladahan soo socda midkooda.
Dhiig karka kale ee isagu ah cudurka dhiig karka ee rasmiga waxaa lagu magacaa baa Essential hypertension ama primary hypertension sababaha keena cudurkan waxaa kamida 1: dhaxal in aad ka dhaxasho qoyskaaga sida hooyo iyo aabe awoow iyo ayeeyo iyo wixii lamida genetics. Blood infection waa caabuqa ku dhaca unugyada dhiiga waxaa kale oo loo yaqaanaa Sepsis oo macna heedu yahay in dhiigga qofka uu sumoobo kadib markii ay bacteria ka buuxsanto.
Sumoobidda dhiigga waxuu ka dhalan karaa bacteria soo weerarto meel kasto oo jirka banii aadamka ka mid ah sida: 1: bacteria da sababta caabuqa mindhicirrada. Calaamadaha lagu garto sumoobidda dhiigga waxaa ka mid ah: 1: Cadaadiska dhiigga oo hoos u dhaca arrintan waxaa ka dhalan karta in qofka uu galo xaalad shock ah xubanaha ugu muhiimsan jirka sida kilyaha, beerka, sanbabada iyo maskaxda waxa ay jooji nayaan in ay si habsami leh u shaqeeyaan.
Calamadaha guud waxaa ka mid ah: 1: Qandho qarqaryo la socoto 2: Wareer iyo calwasaad 3: Kaadida oo yaraato 4: Qandho siyaado ah ama heer kulka oo aad u hooseeyo. Cudurkaan waa cudur halis ah dadka badanaana way u dhintaan, haddii si dhakhso ah loo daaweynin ama cudurka la garan waayo.
Sumoobidda dhiigga waxaa looga hortagi karaa. Cudurkan ayaa isagu ah cudur beryahan dambe dadka soomaalida aad ugu soo batay wixii ka dambeeyay sanadkii ilaa waqtigan sababta ugu weyn ayaana waxa ay tahay in dadka soomaalida ay yihiin dad xanuun ka la soo darsa aysan hore isaga daaweyn ilaa qofka uu gaaro heer uu wax qabsan waayo sida aan kor ku soo xusnayna cudurkan ayaa qofka ugu dhici kara ama ugu soo gudbi kara qaab sahlan isagoona ah cudur qeybo badan oo jirka banii aadamka kamida dhiiga uga gudbi kara sida.
Cudurkan inshaa allaah waxa uu leeyahay daaweyn rasmi ah oo loo qaadanayo bi idni llaah 2 bilood oo xiriirta ah daaweyn taas oo qofka ka sifeyneysa sunta dhiiga ee ay sababaan dhamaan ba cudur sababa yaasha bacteria, da parasite, ka fungus, ka oo iyagu ah kuwa ugu badan ee sababa sumoobidda dhiiga cudur sababaha virus ka loo yaqaano isagu waa looga badan yahay sababidda cudurkaan daaweynta 2 da bilood ee cudurkan waxa ay soo afjareysaa dhamaan ba cudurka oo ah sumoobidda dhiiga iyo cudurka iyo xaaladaha kale ee markii hore ba sababta u aheyd in uu yimaado daaweyn taas rasmiga ah waxaa idiin diyaarisay xarumaha daraasaadka caafimaadka iyo dhaqaatiirta ka howl gasha xarumaha caafimaadka ee website yadan oo iyagu ah ilaha kaliya ee daaweyn iyo daawooyin rasmi ah dadka soomaalida u fidiyaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan.
Inshaa allaah walaalayaal waxaan mar kale sii wadeynaa hanaanka iyo doorka ay vitamins yadu ku leeyihiin jirka banii aadamka iyo jiritaan kiisa intaba waxaana inshaa allaah ku bileynaa qaar kamida vitamins yada aasaasiga u ah nolosha banii aadamka annagoo ku dadaali doona inshaa allaah in dadkeena soomaaliyeed si qoto dheer u fahmaan.